❁Cosy apt for 2p close to Vincennes Castle's❁
Vincennes, Île-de-France, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Pierre De WeHost
U-Pierre De WeHost unokuphawula okungu-74 kwezinye izindawo.
Woza uzozitholela isitudiyo sami (30 m2) imizuzu emi-5 ukusuka eChâteau de Vincennes.
Leli fulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-2, linekamelo lokulala elingu-1 elinombhede ophindwe kabili kanye nombhede usofa (okulungele umuntu oyedwa owengeziwe) futhi lisendaweni ephansi futhi ifakwe kahle kakhulu. Ingadi encane iyafinyeleleka efulethini.
Izungezwe izitolo zokuthenga, amabhikawozi, izitolo zegrosa, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokucima ukoma kanye nezinto eziningi zokuthutha ukuvakashela izindawo zokuvakasha zaseParis. Ungabe usangabaza!
Umbhede kanye nelineni lokugeza linikeziwe
Isitudiyo (30 m2) imizuzu emi-5 ukusuka eChâteau de Vincennes
Sivame ukubuyela endaweni yokulala kodwa kunendawo yokubeka etholakalayo
❋❋ ISIKHALA SEKHISHI ❋❋
- Umshini wekhofi we-Nespresso
- Ipuleti lokupheka
- Umshini wokuwasha nge dryer
❋❋ INDAWO YOKUHLALA ❋❋
- Umbhede kasofa uyatholakala endlini yokuphumula yomuntu oyedwa
❋❋ IBHAFA ❋❋
- Shower nge toilet
❋❋ ISIKHALA ESEKAMELWENI ❋❋
- Umbhede ophindwe kabili onethezekile
4.0 ·3 okushiwo abanye
I-Bois de Vincennes
Itholakala ku-arrondissement ye-12, i-Bois de Vincennes iyindawo eluhlaza enkulu kunazo zonke enhloko-dolobha nendawo yayo engaba ngu-10km². Inkulu ngokuphindwe kathathu kuneCentral Park, le ndawo enkulu enezinkuni ikuvumela ukuthi wenze inqwaba yemisebenzi phakathi nezinsuku ezimnandi. Kusukela ekugibeleni izikebhe, ukugibela ibhayisikili, ukugibela amahhashi noma ngisho nqunu, ungathola izici eziningi zalolu godo, osekuyisikhathi eside lunakekelwa amakhosi.
Ihlathi elihle liyadabukisa ngaphandle kwamachibi ambalwa. Kukhona amaningana e-Bois de Vincennes, futhi imisebenzi iyathuthukiswa ezungeze lezi zindawo zamanzi ezinhle. Okuphumelela kakhulu yisikebhe, okufanele. Ichibi laseDaumesnil eNtshonalanga kanye neChibi leMinimes eMpumalanga kukuvumela ukuthi uhambe ngomkhumbi ngokukhululeka. Ihlala njalo injabulo nabangani noma nomndeni lapho ilanga liphuma.
Ibungazwe ngu-Pierre De WeHost
Inombolo yepholisi: 94080 000175 W5
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$913.
Hlola ezinye izinketho ezise- Vincennes namaphethelo